China fanodinana rano fanalefahana otrikaina ara-batana mandeha ho azy sy mpanamboatra | Zhengxing mekanika
mandeha ho azy dehydrator fitsaboana rano sentrifugal ara-batana
Ity milina ity dia hanome vahaolana tsara indrindra amin'ny indostrian'ny famokarana vera. Izy io dia afaka manasaraka mora foana ny vovo-vera noforonina tamin'ny alàlan'ny fanodinana ny sisiny, mampitombo ny fotoana iainan'ny milina, mampihena ny fotoana fikojakojana, mampihena ny fanjifana rano ary miaro ny tany sarobidy ananantsika. Ny barika dia mihodina amin'ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha, mandritra izany fotoana izany ny rano feno fotaka dia tototry ny paompy ao anaty barika ary atsofoka amin'ny alàlan'ny fihetsehana afovoany haingam-pandeha. Mikoriana miverina mankany amin'ny fitoeran-drano ny rano madio.
Ity milina ity dia hanome vahaolana tsara indrindra amin'ny indostrian'ny famokarana vera. Afaka manasaraka mora kokoa ny vovo-vera noforonina tamin'ny alàlan'ny fanodinana ny sisiny, mampitombo ny fotoana iainan'ny milina, mampihena ny fotoana fikojakojana, mampihena ny fanjifana rano ary miaro ny tany sarobidy ananantsika.
Ity dehydrator maloto ity dia mampiasa teknolojia afovoany. Ny barika dia mihodina amin'ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha, mandritra izany fotoana izany ny rano feno fotaka dia tototry ny paompy ao anaty barika ary atsofoka amin'ny alàlan'ny fihetsehana afovoany haingam-pandeha. Mikoriana miverina mankany amin'ny fitoeran-drano ny rano madio. Ny rafitra maloto maloto dia afaka mamoaka ny fotaka avy ao anaty barika ho azy. Ity milina ity dia manana ny mampiavaka azy amin'ny habetsaky ny habetsahan'ny habe, ny tahan'ny tsy fahampian-drano avo, ny hovitrovitra kely, ny feo kely, ny fandidiana mora sy ny fiarovana. Izy io dia sariaka amin'ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fandotoana rano sy ny fitsitsiana ny vidin'ny tetikasa fikarakarana rano fako.
Mampiasa fomba ara-batana ity masinina ity mba hampisarahana ny sombiny sy ny rano. TSY mila fitaovana famoahana simika.
Rafitra fanesorana sludge
Hafainganan'ny fihodinan'ny barila: 150-2850 R / min
Max. Fikorianan'ny fikorianana 100L / min
Milanja tanteraka: 500kg
Herin'ny hery: 2.2kw
Refy ankapobeny: 1.58mx1.56mx0.8m
Fanatanterahana ny sivana > 90% ho an'ny sombiny lehibe kokoa noho ny 10u
Previous: PLC voafehy vera sandblasting milina fandidiana mora
Manaraka: marindrano ambany-e fitaratra milina fanasan-damba rafitra sisin-drivotra
Masinina mihena amin'ny rano manala rano
Mpanadio vovoka fitaratra
Rafitra fanalefahana rano amin'ny ala malemy
Kitapo tsy fahampian-drano